အားငယ်လိုက်တာ ဟယ် …….. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » အားငယ်လိုက်တာ ဟယ် ……..	67
အားငယ်လိုက်တာ ဟယ် ……..
Posted by Khaing Khaing on Jul 27, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 67 comments
ခေတ်တွေ စနစ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာလိုက်တာ …. ဒါတွေကို ကျွန်မသေရင်တောင် လိုက်လို့ မှီပါ့မလား ……. ကျွန်မငယ်ငယ်က သူများအိမ်မှာ အဖီလေးထိုးထားတဲ့နေရာမှာ ငှားနေရတယ် … ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေချင်တာ တပိုင်းကိုသေလို့ .. ကျောင်းတက်တော့ ရွှေတောင်ကြားထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေနေတဲ့ အိမ် သူတို့စီးတဲ့ကား အားလားလား ကိုယ်ကသိမ်ငယ်နေခဲ့ရတယ် …. သူများတွေက ကိုယ်ပိုင်ကားကို အက္ခရာမြင့်မြင့်တွေစီးနိုင်တယ် ကိုယ်ကတော့ လေးဘီးကားလေးပဲ စီးနိုင်တဲ့ဘ၀ လေးဘီးတောင် အဖေကတက္ကစီလုပ်တော့ ကိုယ်က ၁၀ ခါရံမှ တစ်ခါစီးရတဲ့ဘ၀လေးပါ … Sunny ကားလေးဝယ်နိုင်တော့လည်း ကိုယ်နေတဲ့လမ်းကပြင်တော့ ကားကိုအိမ်ရှေ့မှာ မထားပဲ လမ်းထိပ်မှာထားခဲ့တော့ ကိုယ့်မှာ ဘာကားပိုင်တယ်ဆိုတာလူမသိ မကြွားရပြန်ဘူး …….. ဘ၀ပေး ကုသိုလ်ကံကိုကဆိုးခဲ့တာလေ ……
ဒါနဲ့မျှော်လင့်စရာက တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ် ချမ်းသာအောင် ကိုယ်ပိုင်ကား ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ နေနိုင်အောင် ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတာကိုပေါ့ …… လောကမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ချင်တိုင်း ကြိုးစားတိုင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာတရားရှိမှာလဲ … ကျွန်မ ချမ်းသာဖို့ရာ သင်ထားတဲ့ပညာ လုပ်နေတဲ့အလုပ် ဘယ်လိုမှ ဘ၀တက်လမ်းမရှိခဲ့ဘူး … ကဲနောက်တစ်ခုက ကံ ကံကလည်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူကအာမခံပေးမလဲ ……. ချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားကိုယူဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ့်ရည် ကိုယ့်အရည်အချင်း ဘ၀ပေးကုသိုလ်ကံ ကရှိသေးတယ် …….. ကိုယ်ကချမ်းသာသူကိုရွေးယူပါရဲ့ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှ ဆင်းရဲသွားရင်ကော ……….
လူတိုင်းလူတိုင်းက သူလည်းလူပဲ သူလုပ်သလိုငါလည်းလုပ်နိုင်တယ် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာ မှားတယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ် …….. လူတွေအားလုံးဟာ ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာပါ … တစ်ခြားမပြောနဲ့ ဥပမာ လေးတစ်ခုပြောကြည့်မယ် …… ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်ကျောင်းနေတုန်းက အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက လက်ရေးမျိုးစုံရှိကြပါတယ် …… သူ့လက်ရေးလေးကလှလိုက်တာ ငါလည်းသူ့လိုလိုက်ရေးကြည့်မယ် ဆိုပေမယ့် သူ့လက်ရေးကိုမှီချင်မှီမယ် ကျော်ချင်လည်းကျော်သွားမယ် …….. သူ့လက်ရေးနဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ဘူး သူ့အိုင်ဒီယာ ကိုယ့်အိုင်ဒီယာ သူ့မှတ်ဥာဏ် ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ် သူ့မိဘဆွေမျိုး မျိုးရိုးဗီဇ မတူမှမတူဘဲကို ……..
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဒီဇိုင်းပညာမှာ ကျွန်မထက်ဥာဏ်သွားတယ် …. သူ့မှာအဲဒီအတွေးအခေါ်အတော်ကောင်းတယ် သူ့ကိုတုပြီး ကျွန်မလိုက်လုပ်တယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာတွေကျွန်မခေါင်းထဲစွဲနေပြီး သူ့ထက်မသာခဲ့ပါဘူး …….
နောက်တစ်ခုအားနည်းချက်တစ်ခုကျွန်မမှာရှိတယ် စာသင်ချိန်မှာ ဆရာမက ရှင်းပြတဲ့စာတွေကို ကျွန်မအတန်းထဲမှာ သိပ်နားမလည်ဘူး ……. Chapter တစ်ခုသာ ပြီးဆုံးသွားမယ် ကျွန်မကိုပေး တဲ့အိမ်စာတွေကို သူများဆီကကူးချပြီး ဆရာမကိုပြခဲ့ရတဲ့အဖြစ် …… ဒါပေမယ့် ကျွန်မနားမလည် တာကို အနီးကပ်တစ်ယောက်ယောက်ကရှင်းပြရင် သူများတွေအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ စာကိုတောင် ကျွန်မကျွမ်းကျင်စွာတွက်တတ်ခဲ့တယ် ……. ဒါကကျွန်မရဲ့ အားသာချက်ပါ ……. စာကျက်ရင် တစ်ပွဲထိုးမရသလို စာကို သေချာပိုင်နိုင်အောင်ကျက်ပြီးရင်လည်း စာလုံးတွေကိုတောင် မျက်လုံး ထဲမြင်ယောင်နေတာ ကျွန်မရဲ့အားသာချက် ……. လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အားသာချက် အားနည်းချက် ရှိသလို သူလုပ်သလို သူဖြစ်သလို ငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခု လို့ကျွန်မမြင်မိတယ် ……….
သူတောင်ကြိုးစားလို့ဖြစ်တယ် ငါလည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ သိလိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ချို့ရှိပါတယ် ကျွန်မ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ် အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ် ….. ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့က ရုပ်ရည်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် Attraction အနုပညာဆန်း ဒါတွေက ဖန်တီးယူလို့မရဘူး ကြိုးစားလို့မရဘူး …… အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်က key ၀င်အောင်ဆိုနိုင်သည်ပဲ ထားပါ ကိုယ့်သီချင်းကိုလူကြိုက်ဦးမှ … လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ခံစားချက်ခြင်းမတူတာ ကို အားလုံးသိကြမှာပါ …….. ခံစားချက်ချင်း အကြိုက်ချင်းတူရင် မိန်းတစ်ယောက်မှာ ယောက်ျားတွေ အများကြီးရသွားနိုင်သလို ယောက်ျားမရတဲ့ မိန်းမတွေလည်း ပုံအောနေမှာပါ ……..
သီချင်းဆိုဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူကို သီချင်းဆိုတော်အောင်သင်ပေးလည်း တော်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး … ဥပမာ – ပန်းဝတ်မှုံပိုင်ရှင်မမ သူကသီချင်းဆိုဝါသနာပါပုံရတယ် ဒါပေမယ့် စီရီးသာ (၂)ခွေ ထွက်သွားတာ အသံကတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘူး ……. လူဆိုတာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်း ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ …… သီချင်းဆိုဝါသနာပါလို့ KTV မှာ အပျော်တမ်းသွားဆိုနေတဲ့သူကို မင်းဆိုတာ key မ၀င်ဘူး အသံကြောင်တယ် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ဆိုတာမဝေဖန်သင့်တဲ့စကားပါ ….. သူသီချင်းဆိုချင်တယ် ဒါကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုလို့ရတဲ့ နေရာမှာ ၀င်ဆိုတယ် ဒါကို ဝေဖန်နေရင် သူ့ရဲ့ဝါသနာက လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ရမယ့်နေရာမရှိတော့ဘူးလေ …… ဒါဆိုတစ်ခုပြောပါလိမ့်မယ် အိမ်မှာဆိုပေ့ါ လို့ …… အိမ်မှာဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်လေ ……. ကျွန်မကြုံဖူးတဲ့အဖြစ်လေးတစ်ခုပါ သီတင်းကျွတ်တန်ဆောင်တိုင် ဘုရားပွဲမှာ လူကြီးတွေက အပျော်တမ်း ဆိုလို့ရအောင် စင်ကလေးတွေနဲ့ တနိုင်တပိုင်တည်ဆောက်ပေးတယ် အဲဒီမှာ ကျွန်မလည်းဆိုမယ်ပေ့ါ … ဆိုတဲ့သူတွေက Key ၀င်ချင်မှ ၀င်မယ် မ၀င်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် … ဒါကို ဝေဖန်နေလို့မရဘူး ဒါက အပျော်တမ်းနေရာ ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေ … ဒါကို သီချင်းကြောင်းနားလည်သူက ထိုလူတွေကြားမှာ သွားရောက်ဝေဖန်နေမယ်ဆို တစ်ခြားလူတွေက သူ့ရဲ့ဝေဖန်မှုကို ကြားပြီး အပျော်တမ်းကြည့်နေရာကနေ စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် …….. ထိုလူဝေဖန်တာကို ကျွန်မကြားပြီး စင်ပေါ်တက်ဆို မ၀ံ့မရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ် ….. ကျွန်မတက်ဆိုရင် ကျွန်မကိုရော ထိုလူကသေချာပေါက်ဝေဖန်မှာပဲဆိုတဲ့အသိလေးပေါ့ …. ကိုယ်ကအဆိုတော် ဖြစ်ဖို့ ကံကဝေးတော့ ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှတောင် ၀င်မပြိုင်ခဲ့ပါဘူး …. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပျော်စရာနေရာလေး ကိုယ့်ရဲ့အဆိုလေးကို အားပေးခံရမယ့် တန်ရာတန်ရာနေရာလေးမှာလည်း လွတ်လပ်စွာမဆိုရတော့ ကျွန်မလည်း ထိုနေရာနဲ့ဝေးရာကို ပြေးထွက်ခဲ့မိတော့တယ် ………
တကယ်တမ်းဝေဖန်ချင်တယ် ပြောချင်တယ်ဆို ရှိုးပွဲလိုနေရာတွေ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကဲဖြတ်ပါ ဒါမှလည်း အကဲဖြတ်သူရဲ့အဆင့်အတန်းကော ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေအတွက်ပါ ထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိမှာပါ …… ဒါကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်လုပ်ချင်တာကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာနဲ့ယှဉ်ပြီး ကာလာဒေသအချိန်အခါအလျှောက် လုပ်ကိုင်နေထိုင်သွားတာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလူသားတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားသွားနိုင်မှာပါ ……
ကျွန်မကတော့ ဘ၀တစ်လျှောက် ဖြစ်ချင်တာတွေကို မဖြစ်ခဲ့ရတော့ ပျော်ရာမှာပဲပျော်သလိုနေတော့မယ် ……… ဒီနေရာမှာမပျော်တော့ဘူး ဒီနေရာမှာ ကိုယ့်အတွက်နေရာမရှိတော့ရင် တစ်ခြားနေရာသစ်ရှာပြီးပျော်တော့မယ် …….
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အားငယ်နေလို့ အားငယ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကို စာစီတင်လိုက်တာပါ ……..
- - has written 36 post in this blog.
View all posts by Khaing Khaing →	Blog
Khaing Khaing says: ၀က်သားဒုတ်ထိုးလုံးဝမရောင်းပါ
marblecommet says: ပိုက်ဆံများရလို့ကဒေါ့
may flowers says: ခိုင်ခိုင်ရေ အားငယ်စရာတွေတွေ့လာတိုင်း ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့ ကိုယ်တွေထက်ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေအ
များကြီးရှိနေသေးတာကို သတိရလိုက်ပါနော်…………။ကိုယ့်အပေါ်ကို မကြည့်ပဲ ကိုယ့်ထက်အောက်နိမ့်
ကျတဲ့ လူတွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်ချမ်းသာသွားပါလိမ့်မယ်။
Khaing Khaing says: ကျေးဇူးပါ မမမေ အခုလိုအားပေးတာကို ….. ဒီမန်းလေးဂေဇက်ဝက်ဆိုဒ်ကို ညီမစိတ်ပျော်ရွှင် ရင်လည်းရေးတယ် …. ၀မ်းနည်းရင်လည်းရေးတယ် ….. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုလို အားပေးသူ တွေရဲ့စာလေးတွေတွေ့ရတော့ စိတ်ညစ်တာတွေပြေပျောက်တာပေ့ါလေ ……
ဒီလိုပျော်စရာနေရာလေးမှာ အခိုင်အမြဲတမ်းရင်ဖွင့်ရေးသားချင်နေမိတယ် ……
etone says: မမခိုင်ရေ … လာကမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ချင်တိုင်း ကြိုးစားတိုင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာတရားရှိမှာလဲ … ကျွန်မ ချမ်းသာဖို့ရာ သင်ထားတဲ့ပညာ လုပ်နေတဲ့အလုပ် ဘယ်လိုမှ ဘ၀တက်လမ်းမရှိခဲ့ဘူး … ကဲနောက်တစ်ခုက ကံ ကံကလည်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဘယ်သူကအာမခံပေးမလဲ ……. ချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားကိုယူဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ့်ရည် ကိုယ့်အရည်အချင်း ဘ၀ပေးကုသိုလ်ကံ ကရှိသေးတယ် … အဲ့ဒီစာပိုဒ်လေးကို အရမ်းသဘောကျမိပါတယ် … ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ထပ်တူကျနေလွန်းလို့ပါ … ။
မခိုင်ရေ … KTV မှာ အသံသေး အသံကြောင်နဲ့ ဆိုတာကို ကီးမ၀င်ဘူးလို့ ဝေဖန်လျှင်တောင် စိတ်လက်ဖြေလျော့ဖို့အတွက် ၊ ဖြေဖျောက်ရာ အနေနဲ့ သီချင်းဆိုတာမို့လို့ ………. ကီးမ၀င်ဘူးပြောပြော ဘာပြောပြော ….. ဥပက္ခာပြုပြီး ဆိုချင်သလို ဆိုပါဦးမယ် ။ ကီးမ၀င်မှာစိုးလို့ မဆိုပဲ နေရင်လည်း .. အချိန်ကုန်တာနဲ့အမျှ ပိုက်ဆံက ပေးရမှာကိုး .. ခိခိ :P
Khaing Khaing says: ဥပက္ခာပြုတာကတော့ ပြုတာပေ့ါ …… ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုသူများပြောရင်တော့ နည်းနည်းတော့ ရှက်သားလား ….. အမချစ်ချစ်ဆို သူက key တွေဘာတွေနားလည်တယ် အမဆိုရင်အမြဲကဲရဲ့ ခံရတယ် … ဒါကြောင့်သူ့ရှေ့မှာဆို မဆိုဘူး …. အကဲ့ရဲ့မခံနိုင်သလို ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်း အပြစ်ရှာမယ့် မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်တာမခံနိုင်ဘူး …… ဒါကြောင့်မတိုးတက်တာပြောချင်ပြော … ကိုယ်တိုးတက်မယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ် ….. အမမှာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ် … အမငယ်ငယ်က လွတ်လပ်ရေးပွဲတွေမှာ ကိုယ်မနိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲ ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ကစားနည်း ဘယ်တော့မှ ၀င်မပြိုင်ဘူး …. ငယ်ငယ်က မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုဘယ်တော့မှမပြေးဘူး … မြို့နယ်ပြေးပွဲတွေဆို အမပါတယ် … အဲဒီမှာ အမကဆုရနိုင်တာကို …. ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အဆင့်နဲ့သင့်တော်တယ်ထင်ပြီးမှ အဆင်မပြေတော့ရင်တော့ အဲဒီနေရာကို ကြောခိုင်းလိုက်မယ် ……
etone says: ဒါဆို နောက်တခါ ကာရာအိုကေသွားဆိုရင် အစ်မချစ်ချစ်ကို ခေါ်မလာနဲ့နော် … ။
တူးညားကို လှောင်ရယ်မှာ ကြောက်တယ် … မီးမီး ချက်ချက် ခွိခွိ
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: အမရေးထားတဲ့စာလေး ကောင်းတယ်ဗျာ…
သူ့အတွေး အခေါ် နဲ့ကိုယ့်အတွေးအခေါ်…
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ….
ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း တိုးတက်မယ်…
အတွေ့အကြုံ နဲ့ အမ ပြောသလို ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာ ဆိုသလိုပေါ့နော်…
ကိုယ် ကျွမ်းကျင်ရာ ကိုအားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ….
အမ ပြောထားတဲ့ စာလေးက နှိုင်းယှဉ်မှုလေးနဲ့….
အတွေးတစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိစေတယ်….
mamanoyar says: ခိုင်ခိုင်ရေ ဒီလိုပါပဲ
Khaing Khaing says: မှန်ပါတယ် မမနိုရာ ….. လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ စိတ်ခံစားချက်ခြင်းမတူဘူးပေ့ါလေ ……..
pan pan chit says: မမခိုင်လေး
မဆီမဆိုင် အနော်လည်း အားငယ်တယ်ဂျာ…ဟင့် ကာလာအိုကေမှာတော့ စစချင်းဆိုရမှာရှက်သဗျ
မဆိုတတ်တာတော့ တစ်ပိုင်းပေ့ါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: ဆိုပါအေ ဆိုပါ …… ပုလင်းတူဗူးစို့တွေပဲ ….. ဘာလိုမှမထင်ပါဘူး ………
Moe Z says: Global Self-Esteem နဲ့ Situational Self-Esteem ဆိုပြီး ၂မျိုးခွဲကြည့်မယ်နော်
Global Self-Esteem ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၊
ဦး(…) နဲ့ဒေါ်(…) ရဲ့သား၊ သမီး ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုရယ် ကိုယ့်ရဲ့ personality အပေါ်မှာရယ် မှီတည်တဲ့စိတ် ဒီစိတ်ကိုတော့ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ဘူး။ တော်တော်ကြိုးစားရမယ်
Situational Self-Esteem ကတော့ အဆင့်မြင့်လာအောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်၊ သူကတော့ တသမတ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ် အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာလေးတစ်ခုခုရှိရင် အဲဒီအချိန်မှာ
Social Self-Esteem က နည်းနည်းကျသွားတယ် အိမ်ရောက်လို့ နွေးထွေးတဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့် level ပြန်တက်လာနိုင်တယ်၊ personal skill တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်
အခု မမခိုင်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာက Situational Self-Esteem ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်
မမခိုင်ရေ လူတိုင်းမှာအားနည်းချက် အားသာချက်လေးတွေရှိကြပါတယ်
အားနည်းချက်တွေအတွက် သိမ်ငယ်စိတ် အားငယ်စိတ်တွေမထားပဲ
ကိုယ်ထူးချွန်တဲ့ အားသာတဲ့အချက်ကလေးတွေမှာ သူများထက်သာအောင်ကြိုးစားပြီး
အဲဒီခံစားချက်ကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ …
((( အားကိုးရှိတဲ့သူကများ အားငယ်တယ် လာညည်းနေရသေးတယ် မပြောချင်ဘူး ))) ;)
Moe Z says: စကားမစပ် အဗေတာထဲက သမီးလေးက ချစ်စရာလေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1955
pan pan chit says: မိုးဇက်က သူ့တွဲလောင်းအကြောင်းမသိသေးလို့
သိလို့ကတော့ ဟွင်းးး…ဟွင်းးးး… :P
မအေတူသမီးလေးဆိုပါတော့ :D :D
Khaing Khaing says: အင်ဇာဂီညီလေးလို့ မပြောရဘူး ……. အားငယ်တာတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မငယ်ရဘူး … အဖော်ကိုဆွဲထည့်ပေးသေးတယ် …….
ကိုယ့်ရဲ့အားငယ်မှုတွေကို ဘယ်နေရာမှာမှဖြေဖျောက်လို့မရတော့ရင် ဒီလူရဲ့ဘ၀က ဆုံးပြီးပဲ … ရုံးမှာလည်းအားငယ်ရ … အိမ်မှာလည်းအားငယ်ရ … ဟိုနေရာဒီနေရာ ဖြေဖျောက်စရာနေရာ လေးတစ်ခုတော့ ရှိသင့်တယ်ထင်ပါတယ် … ဒီနေရာလး ကိုတော့ ဘယ်သူကမှ နှောင့်ယှက်တာမလိုချင်တော့ဘူး ………
မိုးဇက်ကလေးရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် …….
Solid_Sn@ke says: 「自尊心」だな。。。
shwe kyi says: ဗူးသီးကြော် ထရံကွက် အရွက်ကြော် အဲဒါတွေရေးထားတာလား ဟင်င်…။ :D
Solid_Sn@ke says: L’autostima :D
CASPER says: I was “self-esteem.” . .
I was studying. .
Very much. .
Yan depressed can not be helped: Postscript. . .
If our eyes are shown. . .
Khaing Khaing says: အားငယ်ပါတယ်ဆိုမှ ဟိုဂျပွန်မက ဂျပွန်စာတွေတင်ပြီး သူ့ရဲ့ဂုဏ်တွေကြွားပြန်ပြီ …… ယောက်မလေးကို ဘာသာပြန်ခိုင်းမယ် ……
pan pan chit says: ဂူးဂဲ ထရန်စလိတ်တာကနေ ဘာသာပြန်တာလား အူးလေး ^^
Was this answer helpful?LikeDislike 295
Rose Minn says: Rose တို့လို ခပ်ညံ့ညံ့ စာရေးတက်တဲ့ သူတွေ ခေါင်းထဲမှာ ရှိတာတောင်။ လက်ကချမရေးတက်တဲ့သူတွေလည်း အားငယ်ရပါတယ် အခိုင်မမ ရယ်။ သီချင်းဆိုရင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကိုပဲ ထည့်ပြီးဆိုတာ မို့ ဝေဖန်ရင်လည်း ကြိုက်သလိုဝေဖန်ပါ။ ခံစားတဲ့ အခါတိုင်းအသံသေး အသံကြောင် ဆိုမှာပဲ။ သည်းခံပေးကြပါ သယ်ရင်းတို့။ ပျော်ချင်လို့ လာတာ။ ဝေဖန်တော့ ခံစားရတာပေါ့ အာဟင့် အာဟင့်။
Khaing Khaing says: အမက သူများလို မြင့်တဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မကျင်လည်ခဲ့ရဘူး နိမ့်ပါးတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကျင်လည်ခဲ့သူဆိုတော့ အတွေးအခေါ်တွေ ဘေးချော်နေမလားပဲ ….. အမရဲ့စာတွေကို အားပေး တာကျေးဇူးပါ … မိုက်လေး ……. လိုင်းမကောင်းတော့ မိုက်လေးကိုမန့်လိုက်တာ Rose အောက်ကိုရောက်သွားတယ် ………
Khaing Khaing says: ဒါကြောင့် အခု Roseရောက်ရှိနေတဲ့ဘ၀ကို လူ့ဘ၀လို့ခေါ်တယ် … လူတွေက ချီးမွမ်းမယ် ကဲ့ရဲ့မယ် …. ဝေဖန်မယ် မြှောက်ပင့်မယ် …….. ဒီလိုပဲကျင်လည်နေတဲ့ ပုထုစဉ်လူ့ဘ၀ပါ ….
surmi says: မခိုင်ခိုင်ရေ
အချိန်မရတော့ လို့ညမှပြန်မန့် ဦးမယ် ဘွတ်ကင်တင်ထားတာ
နည်းနည်းပြောရရင် လူတိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေ နောက်ကြောင်းခံ
ပုံဝတ္ထုတွေရှိစမြဲ ဆိုတော့ 
ညမှအေးဆေးမန့် တော့ မယ်ဗျာ
နွယ်ပင် says: မခိုင်ရေ တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အားငယ်စရာတွေက အများသားပါလား …
အဲလိုဆိုပြီးတော့လည်း အားငယ်နေရမယ်လည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့ …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နာမယ်လေးနဲ့လိုက်အောင် ခိုင်ခိုင်မာမာလေး ရပ်တည်ပြလိုက်တာပေါ့ ….
Khaing Khaing says: နံမည်ကသာ ခိုင်နေတာ လူကတော့ ယိုင်နွဲ့နွဲ့ပါ နွယ်ပင်လေးရယ် ……….
manawphyulay says: ခိုင်ခိုင်ရေ…ဘာမှအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ဖြစ်ချင်တာမဖြစ် မဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာတာပါပဲ။ အဲလိုဖြစ်လာရင်လည်း နေတတ်အောင် ဖန်တီးယူရမှာပါ။ ကိုယ်မရှိတာကို တမ်းတနေရုံနဲ့ ဖြစ်မှမလာပဲ စိတ်ညစ်စရာ အားငယ်စရာသာ လွှမ်းမိုးနေမှာပဲလေ.. ဒီတော့ ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ ကြိုးစားနေရင် တစ်နေ့တော့ ဖြစ်လာမှာပါ။ လူတိုင်းမှာ ဘ၀ဆိုတာရှိကြတာပဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်တာ အပေါ်ကြီးပဲ ကြည့်မနေပါနဲ့ အောက်လေးလည်း ငုတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ပြောရရင် မနောဘ၀က ပိုဆိုးပါတယ်လေ… ဒီတော့ အားငယ်ပြီး စိတ်သောကရောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မနောတို့လည်း ဘ၀မှာ နေစရာတောင် ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရင်းနဲ့တောင် အားငယ်လာပြီ… အရေးထဲ နှာရည်ကလည်း ထွက်လာပြီ… ဟင့်…. ရွှတ်… ဖတ်…
Khaing Khaing says: မနောလေးရေ ……. အမကအားငယ်တာကို ပျော်စရာရှာဖြေဖျောက်တတ်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတော့လည်း အမှတ်တမဲ့မင်းကိုလွမ်းသလိုဖြစ်မိတာပေ့ါလေ …
ဘုဂလန့်် says: ဒါကဒီလိုရှိတယ်
Khaing Khaing says: လန့်လန့် … ရှင်းမှ အခိုင်လည်း တော်တော်ရှင်းသွားပါတယ် ………
မွန်မွန် says: အားမငယ်ပါနဲ့ အစ်မရယ်…အစ်မလို ဘ၀တူတွေ အများကြီးပဲ ရှိနေပါတယ်။ အစ်မမှာ ကံကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ sunny ကားပိုင်တယ်ဆိုတာ ကားမပြောနဲ့ စက်ဘီးတောင် လုံလောက်အောင်မရှိတဲ့သူတွေထက် အများကြီးသာပါတယ်။
ရှေ့ကြည့်ရင် ရင်ဘတ်၊ နောက်ကြည့်ရင် ကျော ပဲ ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ အစ်မက ပိုကံကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံး အစ်မက စာကို တစ်ခါတည်းနားမလည်ရင်တောင် အစ်မကို စာပြန်ရှင်းပြမယ့် သူငယ်ချင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့မှာပါ။ ဒါလည်း ကံကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ သီချင်းဆိုတတ်မှ၊ လက်ရေးလှမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဖြစ်နေရတဲ့ ဘ၀မှာ၊ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ဘ၀ကို နေတတ်အောင်နေဖို့ပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
Khaing Khaing says: အမဘ၀မှာ အဆိုးနဲ့အကောင်းကအမြဲဒွန်တွဲနေခဲ့တာပါ …. မွန်မွန်ပြောသလို စာရှင်းပြခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိခဲ့သလို မနာလိုပြိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ် … တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ဖြစ်ချင်တာလေးလည်းဖြစ်ခွင့်တော့ ရှိချင်ပါတယ် …….
shwe kyi says: အဟင့် ငိုချင်လိုက်တာနော်။ ရွှေကြည်လည်းအားငယ်လာပြီ။
ရွှေကြည်တို့မှာ မိဝေးဖဝေးနဲ့တနယ်တကျေးမှာ ပိုက်ဆံကလည်းသူများလိုပေါပါမသုံးနိုင်။
ရန်ကုန်လူနေမှုဘ၀မှာ မနည်းမှီအောင်လိုက်နေရတယ်။ နယ်ကဆိုတော့မသိတာတွေကလည်းအများသား။
မခိုင်ရေဘာမှအားမငယ်နဲ့ အစ်မနောက်မှာရွှေကြည်တို့ရှိသေးတယ်သိလား ကားဆို ဆိုက်ကားတောင်မပိုင်ပါဘူးအစ်မရယ်။ မခိုင်ကတော်ပါတယ် အစ်မရေးတာတွေကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
Khaing Khaing says: ရွှေကြည်လေးရေ အားမငယ်နဲ့ ညီမကချောပါတယ် ….. ကိုကြီးအံချာတုံးက ညီမကိုမင်းသမီးတင် ထားတာပဲ …. မမတောင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်လိုက်ရဘူး ……. အဟင့် အဟင့်
pan pan chit says: အနော့်လို သစ်စိမ်းပင်ပေါက်လေးကတောင် အားငယ်တယ်ဆိုတော့
မမခိုင်လို သစ်ဆွေးဒုံးဂျီးအဖို့မှာကား ဆိုဖွယ်မရှိတော့ပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: အားငယ်သူအားပေးပါ …..
သများအားငယ်နေတယ်လေ ယောက်မလေး ….. အားမပေးပဲ ၀ါးကူထိုးနေတာလားဟင် ……..
Ma Ei says: ခိုင်ခိုင်ရေ…
အမ တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ post လေး ပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်…
ပုံပြင်လေးတစ်ခု ပြောပြသူက ဟန်ဂျီအင်းပါ…
ကိုရီးယားကား ချစ်စံအိမ် ထဲက မင်းသမီးလေ …မင်းသားက လီရောင်ဂျေး… သိတယ်မို့လား…
သူပြောတာလေး အရမ်းကြိုက်သွားလို့ ပြန်ပြောပြမလို့ပါ…
မင်းသား လီရောင်ဂျေး ကိုသူ့ အဖေက ဆူ ရိုက်လိုက်လို့ နာကျင်နေတဲ့ အချိန်မှာ…
ဟန်…ယုန်နဲ့ လိပ် ပုံပြင်လေး ပြောပြရမလား…
လီ…..ယုန် နိုင်သွားတယ် ပြောမှာမို့လား၊ မပြောနဲ့
ဟန်…မဟုတ်ပါဘူး၊ခုပုံပြင်က အသစ် နားထောင်နော်…
တနေ့မှာ ယုန် နဲ့ လိပ် အပြေးပြိုင် ကြသတဲ့…
ယုန်ကတော့ မြန်တဲ့သူမို့ ရှေ့က ပြေးနေတာပေါဲ့…
လိပ်ကလေးက ကြိုးစားပြီးပြေးနေတုံး ခရုလေးတကောင် တရွေ့ရွေ့နဲ့ သွားနေတာတွေတော့
အတော်နှေးတဲ့ကောင် ဒီလိုသွားနေ ဘယ်လောက်မှရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး လာတက် ဆိုပြီး ကျောပေါ်တင်လာသတဲ့…
ဆက်သွားရင်း ပက်ကျိ တစ်ကောင် တွေ့ပြန်ပါလေရော…အဲ့ဒါနဲ့ သူ့ကိုပါ ထပ်ပြီးကျောပေါ် ခေါ်တင်လိုက်ပြန်ပါရော…
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ကျောပေါ်ရောက်နှင့်နေတဲ့ ခရု က နောက်တက်လာတဲ့ ပက်ကျိ ကို ဘာပြောလဲ သိလား…
ဟန်…မင်း မြဲမြဲကိုင်ထား အောက်ပြုတ်ကျမယ်… ဒီလိပ်က အရမ်းအပြေးမြန်တယ် အပြေးမြန်တဲ့သူတဲ့ ဟားဟားဟား…
ကျွန်မ သူပြောတာလေး အတော်သဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်…
ယုန် လိပ် ခရု ပက်ကျိ စသည်ဖြင့် ကျွန်မ တို့တွေလဲ ဘ၀တွေ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ၇ှိနေကြပါတယ်…
ရှင်သန်နေရတဲ့ ဘ၀တွေမှာ နာကျင်ကြေကွဲမှုတွေ၊ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုတွေ၊ ပူပင်သောကတွေ၊မချိတင်ကဲ နဲ့
ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာ ၊ကိုယ့်ကိုမှ ဖြစ်ရလေခြင်း ၊ ဆိုးဝါးလေခြင်း ၊စသည်ဖြင့်တွေးကာ ခံစားနေမိကြပါတယ်…
အမှန်တော့ကိုယ့်ထက်ဆိုးဝါးစွာ ခံစားနေရသူတွေ ရှိနေပါတယ်…
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တစ်ဦးတည်းခံစားရတာ၊ ခံစားဖူးတာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်…
အောင်မြင်မှုရနေသူတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ကအားငယ်စွာနေရတဲ့ အခြေအနေကို ငေးမျှော်အားကျ နေကြရတဲ့
သူတွေရှိနေပါလားလို့စဉ်းစားမိရင် … အားငယ်နေအုံးမှာလား…ဖြေသာသွားပြီပေါ့နော်… ဟားဟားဟား…
ဒါကြောင့် ဟန်ဂျီအင်း ရဲ့ ပုံပြင်လေးထဲကစကားလေး ပြန်ပြောမယ်နော်…
Khaing Khaing says: မအိရဲ့ပို့စ်လေးကို ဖတ်ဖူးပါတယ် ……. အခုလို ထပ်ပြီးအားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … လောကကြီးမှာ အားငယ်စိတ်ကိုဖြေဖျောက်ပြီးတစ်လှမ်းတိုးလိုက် အားငယ်စရာတွေထပ်တွေ့လိုက် …… ဒီလူ့ဘ၀ကြီးမဆုံးသရွေ့ ဒီသံသရာကရုန်းမထွက်နိုင် သမျှတော့ ဒီဒုက္ခတွေကို မာန်တင်းပြီးကျော်ဖြတ်ရဦးမှာပေ့ါလေ …….. အားငယ်စရာတွေ မဖြစ်အောင် မတွေ့မိအောင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင် မျက်စိ မှိတ်ခဲ့ရတာတွေလည်းများပါတယ် မအိရယ် ………
အရီးခင်လတ် says: သီချင်း ဆိုမကောင်း တောင်မှ
စာရေးကောင်း သူမို့ အားမငယ် သင့်ပါဘူးလေ။ :-)
Khaing Khaing says: အရီးလတ်ရဲ့ လူအများအပေါ်စာနာနားလည်အားပေးမှုကို လေးစားလျှက် …….
ပင်လယ် ပျော် says: လူဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ထက်သန်မှ ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်မှာပါ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့နေရင်ဘာလုပ်လုပ် အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး အခိုင်လေးရယ်
surmi says: ကဲ နေ့လည်က အကြွေးလေးဆပ်ဦးမယ် ။
ကျုပ်လည်း အားငယ်တတ်တယ်ဗျ ၊ ခုတော.မဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်ကပါ ….
ကျုပ်ကပိုဆိုးတယ် …အားငယ်လာရင် ပြဿနာပါရှာရော …။ အဓိကတော.သိမ်ငယ်စိတ်ကြောင်.
ဖြစ်၇တာပေါ့ လေ ။ ကြီးလာတော. ….လူတွေများစွာ နေရာများစွာ တွေ့ ကြုံ ရောက်ဖူးလာတော.
ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို.မြင်လာတယ် ။ဆိုတော.ဗျာ …နေရတဲ.လူ့ ဘ၀ကခဏလေး ဒါကို ကြေနပ်အောင်
မနေတတ်ရင် ကျုပ်တို. လူ့ ဘ၀မှာ ဘာများနေပျော်ဘွယ်ရှိတော.မလဲ ….ဒီတော. ..ကျုပ်နေတတ်အောင်
နေရင်း ရောက်လေရာမှာ ကျေနပ်သွားတာဘဲဗျို. ။ တခါက လို.ဆိုပြီး ကျုပ် ဖြတ်သန်းရတဲ.ခရီးကြမ်း
ကို ရေးမိသေးတယ် …ပြီးမှ မတင်တော.ဘဲဖျက်ပြစ်လိုက်တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော. ကျုပ်ဘ၀ ကျုပ်ပြန်
စဉ်းစားရင်း သိမ်ငယ်မိမှာစိုးလို့ဘဲ ..။မခိုင်ခိုင်ရဲ့  မိသားစုလေးက ကြည်နူးချမ်းမြေ့ စရာလေးပါ ။
စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့  ဒီလိုမိသားစုမျိုး ရဖို့မလွယ်ပါဘူး …..ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ကြော်ငြာဝင်လိုက်ဦးမယ်
ကျုပ်မှာလဲ သားအငယ်ဆုံးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ …….ဟဲ ဟဲ
Khaing Khaing says: ဦးဦးစာမိ အားပေးရင် အမျိုးစပ်သွားတာပဲ ….. သမီးလေးကို အမျိုးတော်ချင်ရင် စည်းကမ်းချက်တွေရှိတယ်နော် …… ကျေနပ်မယ်လက်ခံမယ်ဆို အခုကတည်းက တန်းစီထားလို့ရပါတယ် …….
pooch says: အရိုးကြေကြေ အရေခန်းခန်း အခွင့်အလမ်းကို မိအောင်ဖမ်းပါတဲ့
ဘာမဆို ကိုယ်ကသာ သဲသဲမဲမဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ရကို ရရပါတယ်။
ဘာမှ အားငယ်စရာ မရှိပါဘူး။ မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အားတင်းပြီး ဆက်လျှောက်ပါအုန်း။
Khaing Khaing says: အမပု ……. ညီမကို ကျီပွေ့အတက်ပေါက်တဲ့ပုံပြင်ကိုပြောနေသလိုပဲ ….. အမရေ ညီမစိတ်ထဲမှာ အခုချိန်ထိရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဘယ်တော့မှ မပျက်သေးဘူး မျှော်လင့်နေပါတယ် .. ညီမရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တယ် ….. ကိုယ်မဖြစ်တောင် ကိုယ့်သမီးလေး ကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရင်ကောင်းမလားပဲ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သေချာ စဉ်းစားမိတာက အဲလိုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ညီမစိတ်နဲ့ဖြစ်ပါ့မလား ……..
အမပုရဲ့အားဆေးတခွက်ကို သောက်သုံးသွားပါကြောင်း ……..
kai says: ဒေးလ်ကာနယ်ဂျီစာအုပ်ထဲမတော့…
လက်တဖက်ပြတ်နေသူက.. ခြေ၂ဖက်လုံးပြတ်နေသူ.. လက်တွန်းလှည်းလေးနဲ့.. ပျော်ပျော်သွားနေတာကြည့်ပြီး.. သူ့အားငယ်စိတ်တွေဖျောက်ရတယ်. ရေးဖူးတယ်..။
ဒါက.. ရေတ၀က်ရှိတဲ့.. ဖန်ခွက်ကို.. ကြည့်ပုံကြည့်နည်းနဲ့… ဆင်ဆင်ပါပဲ..
ငါ့မှာ.. ရေတ၀က်ကြီးများတောင်ရှိတာပဲ.. တွေးပြီး.. ရေတဖန်ခွက်ပြည့်အောင်..ဖြည့်ပါနော..
Is the glass half empty or half full? – Wikipedia, the free encyclopedia
A glass of water either half empty or half full. Is the glass half empty or half full? isacommon expression, used rhetorically to indicate thataparticular situation …
Khaing Khaing says: ၀မ်းနည်းမှုတွေကြားထဲက ညီမရဲ့အားငယ်မှုကို အားပေးအသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ သူကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .
surmi says: သဂျီးကိုတော့ အရမ်းလေးစားသွားပြီ
သဂျီးမှာဝမ်းနည်းဖွယ်ကိစ္စရှိနေတာတောင် သူ့ အလုပ်သူ့ တာဝန်မပျက်ဘူးနော
ခင်ဗျားအားငယ်နေသေးရင်တော့ခင်ဗျားအလွန်ဘဲဗျ
Khaing Khaing says: ကိုစာမိရယ် ပြောရင်းတောင်ပိုဝမ်းနည်းစိတ်ထိခိုက်လာတယ် ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အားငယ်တာတောင် အလွန်တွေမလွန်တွေဖြစ်လာတတ်သလား ………. လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ခံယူချက်စိတ်နေစိတ်ထား အမျိုးမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ် …. အားငယ်ဝမ်းနည်း တတ်တာ ညီမရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းကဗီဇပါ ……. အခုကျွန်မအသက်က လူ့သက်တန်းမှာ ၃ပုံ ၂ပုံကျိုးနေပါပြီ ဒီဗီဇကြီးကို ဖျောက်ဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကို ကြိုးစားရပါဦးမယ် …… အားပေးတဲ့လူတွေရှိလို့ အားငယ်စိတ် အနည်းငယ်တော့ လျော့သွားပါရဲ့ ဒါပေမယ့် လုံးဝအားမငယ်ရတော့ဘူးဆိုတာတော့ အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနေတဲ့ ကားကချက်ခြင်း ဘရိတ်အုပ်ရင်တော့ တစ်ခုခုဖြစ်သေးတာပဲလေ ……
surmi says: တမျိုးမထင်ပါနဲ့ ဗျာဟ
ကဲ ကဲ ဘွာတေး ဘွာတေး
Khaing Khaing says:ွှအမျိုးမတော်ရမှာစိုးလို့လား …… ခစ်ခစ်ခစ် စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး …… ပျော်ချင်လို့ရွာထဲလာတာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပါတယ် ………
Was this answer helpful?LikeDislike 9987
မောင်ပေ says: လူတိုင်း ခဏတဖြုတ်လောက်တော့
Gipsy says: အားမငယ်ပါနဲ့ မခိုင်ရေ .. ကျနော်လဲ အသက် ပိုပိုကြီးလာတယ် …
ဆက်၍ ဆက်၍ ကြိုးစား အားထုတ်နေရဆဲပါ ..
အားလုံး ဘဝတူတွေပါဗျား …။
Phaung Phaung says: ခံစားချက်ခြင်းတူလို့ ဒီပို့စ်လေးကိုသဘောကျပါတယ်…
ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်/ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမားထားရင် တနေ့နေ့တော့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်..
တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ကြိုးစားရင်းနီးလာပါပြီ…. ကြိုးစားဖို့တော့လိုတာပေါ့
ပြီးတော့ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပြီး မိဘကျေးဇူးသိတတ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်လို့ထင်မိပါတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1537
ကိုရင်စည်သူ says: မခိုင်ခိုင်ရေ… အားငယ်မနေပါနဲ့… ဘေးမှာ
အားကိုးရတဲ့ ပင်လယ်ပျော့ကြီး ရှိနေတာပဲဟာ… ဟီးး :D :D
အားနာတတ်တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 174
ster says: စိတ်အားငယ်တတ်ရင် ကိုယ်.အပေါ်ကို သိပ်မကြည်.ပဲ ကိုယ်အောက်ကို ကြည်.ပြီး ပျော်အောင်နေသင်.ပါတယ်၊
အားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်လို. ကိုယ်ထင်နေတဲ. သူတွေလဲ သူတို.အပူနဲ. သူတို. ရှိကြပါတယ်၊
မြင်.တယ်၊ နိမ်.တယ်ဆိုတာတွေ အားလုံးဟာလည်း ခဏပါပဲလို.ထင်ပါတယ်။
Foreign Resident says: ဘာများ အားငယ်စရာ ရှိလို့လဲ Khaing Khaing ရယ် ။
ဘာလဲ ဘဲဘဲ နှိပ်စက်လို့လား ။
ဘဲဘဲ နှိပ်စက် ရင် အဘ ဆီ Personal Mail ပို့လိုက်လေ ။
အဘ ဖုန်းဆက်ပြီး တိုင်လိုက်မယ် ။
( နောက်တာနော် ၊ ကြား ၂ ကြားထဲ မဝင်ရဲပေါင်ကွယ် ) :P
ပင်လယ် ပျော် says: မှားသွားပြီ ဘဘဖောေ၇….တကယ်တမ်းကပြောင်းပြန်ဗျ…ဟီးဟီး
Foreign Resident says: သိပါ့ ပင်လယ် ပျော် ရေ ။ သိပါ့ ။
ဒီလောက် သွက်တဲ့ ( ဥာဏ်ထက်တဲ့ ) ကလေးမ ဘဲဟာ ။
သူ့ ဘဲဘဲ တော့ မလွယ်လောက်ဘူး ဆိုတာ ။
ဟီးဟီး ၊ အဘ လည်း ဘဝ တူဘဲ သိလား ။ ဟီးဟီး ။
ကိုရင်စည်သူ says: အဘဖောနဲ့ ပင်လယ်ပျော့တို့လို ဘ၀တူဖြစ်သွားအောင်…
တားတားကိုလည်း ခပ်ထက်ထက် မိန်းမတစ်ယောက်ရှာပေးပါရားဟင်… ဒီတစ်သက်တော့ ခပ်ထက်ထက် မရွာမယ့်မိုးကို စောင့်ရင်း..
ကိုရင်လည်း လူပြိုကြီး ဖြစ်ရတော့မယ်.. ထင်ပါ့… ပင်လယ်ပျော့နဲ့ မမခိုင် အောင်သွယ်ပေးရင်… တားတား ယခုစီးနေတဲ့
စီးတော်ယာဉ်သင်္ဘော အောင်သွယ်ခပေးပါမယ်နော့… ဟီးးး :P :P
Was this answer helpful?LikeDislike 3116
Foreign Resident says: သြော် ကိုရင် က ၊
အဘ နှင့် ပင်လယ် ပျော် ဒီလောက် ဝန်ခံနေတာတောင် ၊
ခပ် ထက်ထက် ကိုယူပြီး ၊ အပိုး ကျိုးကျိုး နေချင်တယ်ပေါ့လေ ။
စဉ်းစားပါဦ ကိုရင်ရယ် ၊
တော်ကြာ ရွာထဲမှာ သင်္ဘောသီး မှန်ရင် ၊
မိန်းမ ကြောက် ( အဲ မှားလို့ ) ချစ် ရတယ်လို့ ပြောနေပါ့မယ် ။
Was this answer helpful?LikeDislike 7074
etone says: ကိုရင်စည်သူ … သဘောင်္ပေါ်ရောက်တာနဲ့ … နီးရာဓါး လွတ်ပြီဆိုတော့ ….. အသံတွေ ထွက်နေတယ်ပေါ့လေ …… ။
နီကီတာဆိုတာ ..ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော် …. ဒဗစ်ရှင်ကတောင် … ဖောက်ထွက်လာနိုင်တာ …. လျှပ်စီးလိုပဲ .. လက်ရော ခြေရော မြန်ပြီးသား …. ဟီးဟီး :P
Was this answer helpful?LikeDislike 1808
Khaing Khaing says: အဘဖောရေ ….. လူတွေအမြင်မှာသာ အဲလိုထင်နေတာပါ တကယ်တော့ မိအေးဂဏန်းညှပ်နေတာကို ဘယ်သူမှ မသိဘူး …….
ကိုစည်သူရေ …. ကိုစည်သူအတွက် ခပ်ထက်ထက် မိန်းမတော့မရှာပေးဘူး ခပ်ထက်ထက်ဓါးမပဲရှာပေးလိုက်မယ် … တကယ်တော့ သင်္ဘောသီးလေးတွေက မိန်းမကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး …. ချစ်တာ ချစ်တာ မယုံမေးကြည့် ပင်လယ်ပျော်ကို …….. ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ ကဲချင်တိုင်းကဲတော့ မိန်းမရှေ့မှာ ဟန်ချောင်နေတာရယ် ……
သူ့ကိုရွာထဲခေါ်မိတာကိုယ့်အမှား ကိုယ့်သိက္ခာကိုချဖို့ ခေါ်မိသလိုဖြစ်နေတယ် …. Was this answer helpful?LikeDislike 3116
Foreign Resident says: ” ကိုယ့်နောက်ကွယ်မှာ ကဲချင်တိုင်းကဲတော့
မိန်းမရှေ့မှာ ဟန်ချောင်နေတာရယ် ”
တွေ့လား ၊ ကိုရင် ကြည့်ကြည့် ။
ဥာဏ်ထက် လွန်းပြန်တော့လည်း ၊
အဘ တို့မှာ ဖြောင့်ကွယ်လေးတောင် ကွယ်ခွင့် မရှိတော့ဘူး ၊
ချက်ချင်းကို တန်း ပေါ်သွားရပြီ တွေ့လား ။
ကဲ ၊ ကဲ ၊ ပင်လယ် ပျော် ရေ ဝန်သာခံလိုက်ပေတော့ ။ :P
Was this answer helpful?LikeDislike 5623
Solid_Sn@ke says: ဟိုနေ့ကသွားစရာရှိနေလို့ …အမြန်ချရေးလိုက်တာ…
အခုပြန်လာလို့ … အကျယ် ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်….
အပေါ်ကအကြောင်းတွေကတော့ Personal ကိစ္စတွေ ဖြစ်လို့ ..မှတ်ချက်ပေးစရာမရှိပါကြောင်း..
သီချင်းဆိုဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူကို သီချင်းဆိုတော်အောင်သင်ပေးလည်း တော်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး … ဥပမာ – ပန်းဝတ်မှုံပိုင်ရှင်မမ သူကသီချင်းဆိုဝါသနာပါပုံရတယ် ဒါပေမယ့် စီရီးသာ (၂)ခွေ ထွက်သွားတာ အသံကတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ဘူး …….
သဂျီးက သူများအတင်း မပြောရပါဝူးဆိုမှ … လုပ်ပီ…
တခုဗျ… အနှီ မမ ..၂ခွေ ထုတ်တာတော့ဟုတ်ပါဘီ …
ဆိုဟန် ဆိုပေါက် အသံအား … မေးရိုက်မေးဝဲ …အ၀င်အထွက် အဆွဲအငင် …အဖြတ်အတောက်
အငေါက် အရှိုက်… ဒါတွေ တိုးတက်ဖို့ ၁နေ့ဘယ်နှနာရီ ဗိုကယ် လေ့ကျင့်သလဲ လေး.. သိချင်သား
အကောင်းပြောတာပါ… ဘာမှ လေ့ကျင့် သင်ယူမှု မရှိဘဲ ဆက်ထုတ်ရင်တော့ ..
လူဆိုတာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်း ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ …… သီချင်းဆိုဝါသနာပါလို့ KTV မှာ အပျော်တမ်းသွားဆိုနေတဲ့သူကို မင်းဆိုတာ key မ၀င်ဘူး အသံကြောင်တယ် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ဆိုတာမဝေဖန်သင့်တဲ့စကားပါ ….. သူသီချင်းဆိုချင်တယ် ဒါကြောင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုလို့ရတဲ့ နေရာမှာ ၀င်ဆိုတယ် ဒါကို ဝေဖန်နေရင် သူ့ရဲ့ဝါသနာက လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ရမယ့်နေရာမရှိတော့ဘူးလေ …… အင်း …သည်လိုဗျ… သူငယ်ချင်း ၅ယောက် သီချင်းသွားဆိုတယ်.. တယောက် ၁ပုဒ်
ဒါမှမဟုတ် ၂ပုဒ် နှုန်းလောက်နဲ့ ..အလှည့်ကျ ..ပတ် မယ် ပေါ့ဗျာ ..
ကီးမမီရင် ကီးချပေး ..လိုရင် တင်ပေး …ကီးကြောင်သွားရင် ၀င်ထိန်းပေး ..
အဲ … ကောင်းရင် ..ကောင်းတယ်ကွ … မကောင်းရင် မကောင်းဘူးကွ …ပြောခွင့်ရှိပါတယ်…
အလှူအိမ်သွားစားတာကအစ ..ဆီများလိုက်တာ …အရည်ကျဲလိုက်တာ ..ဝေဖန်နေကြတာပဲဗျာ
(အလကား စားရတာတောင်နော..) ဆိုတော့ … ၀ါလိခန်.. (American system) နဲ့
ဆိုကြတဲ့ ဘော်ဒါတွေက ..ကောင်း …ကောင်းတယ်.. .မကောင်းမကောင်းဘူး ပြောလို့ရပါတယ်..
ကူလည်းကူပါ… အဲ …မင်းကတော့ ကောင်းလို့ ၃ပုဒ်ဆို ဟိုကောင်က တော့ မကောင်းလို့ ၁ပုဒ်ပဲ
ဆို ..ဆိုတာမျိုးသာ မလုပ်သင့်တာပါ ..အဲ့ဒါဆိုရင် discrimination ဖြစ်သွားပါပြီ …
(စကားမစပ် …Stress အတွက် အဲ့သလို အဖွဲ့လိုက် ကာကာ သွားဆိုတာက …
တကယ်တမ်း stress ပြေလျော့စေဖို့ အထောက်အကူမဖြစ်ဘူးဆိုတာ …နောက်ဆုံး လုပ်ထားတဲ့
သုတေသန တခုကပြောတယ်ဗျို့ ..တစ်ယောက်တည်း ဆိုတာကသာ Stress အတွက် အကောင်းဆုံး
ဖြစ်ပါသတဲ့ ..ထားပါတော့ Stress အကြောင်း..)
ဒါဆိုတစ်ခုပြောပါလိမ့်မယ် အိမ်မှာဆိုပေ့ါ လို့ …… အိမ်မှာဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်လေ ……. ကျွန်မကြုံဖူးတဲ့အဖြစ်လေးတစ်ခုပါ သီတင်းကျွတ်တန်ဆောင်တိုင် ဘုရားပွဲမှာ လူကြီးတွေက အပျော်တမ်း ဆိုလို့ရအောင် စင်ကလေးတွေနဲ့ တနိုင်တပိုင်တည်ဆောက်ပေးတယ် အဲဒီမှာ ကျွန်မလည်းဆိုမယ်ပေ့ါ … ဆိုတဲ့သူတွေက Key ၀င်ချင်မှ ၀င်မယ် မ၀င်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် … ဒါကို ဝေဖန်နေလို့မရဘူး ဒါက အပျော်တမ်းနေရာ ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေ … ဒါကို သီချင်းကြောင်းနားလည်သူက ထိုလူတွေကြားမှာ သွားရောက်ဝေဖန်နေမယ်ဆို တစ်ခြားလူတွေက သူ့ရဲ့ဝေဖန်မှုကို ကြားပြီး အပျော်တမ်းကြည့်နေရာကနေ စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် …….. ထိုလူဝေဖန်တာကို ကျွန်မကြားပြီး စင်ပေါ်တက်ဆို မ၀ံ့မရဲဖြစ်ခဲ့ရတယ် ….. ကျွန်မတက်ဆိုရင် ကျွန်မကိုရော ထိုလူကသေချာပေါက်ဝေဖန်မှာပဲဆိုတဲ့အသိလေးပေါ့ …. ကိုယ်ကအဆိုတော် ဖြစ်ဖို့ ကံကဝေးတော့ ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှတောင် ၀င်မပြိုင်ခဲ့ပါဘူး …. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပျော်စရာနေရာလေး ကိုယ့်ရဲ့အဆိုလေးကို အားပေးခံရမယ့် တန်ရာတန်ရာနေရာလေးမှာလည်း လွတ်လပ်စွာမဆိုရတော့ ကျွန်မလည်း ထိုနေရာနဲ့ဝေးရာကို ပြေးထွက်ခဲ့မိတော့တယ် ………
တကယ်တမ်းဝေဖန်ချင်တယ် ပြောချင်တယ်ဆို ရှိုးပွဲလိုနေရာတွေ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ အကဲဖြတ်ပါ ဒါမှလည်း အကဲဖြတ်သူရဲ့အဆင့်အတန်းကော ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေအတွက်ပါ ထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိမှာပါ …… ဒါကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်လုပ်ချင်တာကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာနဲ့ယှဉ်ပြီး ကာလာဒေသအချိန်အခါအလျှောက် လုပ်ကိုင်နေထိုင်သွားတာ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကလူသားတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားသွားနိုင်မှာပါ အပျော်တန်း မို့ …မဝေဖန်သင့်ဘူး တားလို့ မရစကောင်းဘူးဗျ…
ယနေ့ခေတ် ..SNS ပိုသုံးလာလေ ပို transparent ဖြစ်လာလေ
ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ …။
လောကဓါဏ်(၈)ပါး အကြောင်း ကိုပဲ ဆွဲပြောရတော့မှာပဲ ….
ဝေဖန်တာ သုံးသပ်တာ အကဲဖြတ်တာ ကတော့ … နေရာတကာမှာ ရှိနေမှာပါပဲ …
အဲ … ထိပ်ဆုံးက ပြောထားတဲ့အိမ်မှာဆိုပေ့ါ လို့ ဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်ရဲ့ဗျာ…
အင်း … တစုံတရာ ကို ရည်ညွှန်းသလို ရှိတယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် ….
ကြိုက်နှစ်သက်သလို သဘောထားကွဲလွဲနိုင်လို့ … ဘာမှ မပြောလိုပါ…
ကျနော်တို့ အကုန်လုံးက ရှေ့ကို လမ်းဆက်လျောက်နေကြသူတွေချည်းပါ…။
ဘာလို့ ပိုကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်ကြရမှာလဲ….။ ဘာလို့ .. ကောင်းတာကို ကောင်းကြောင်း
မပြောနိုင်ကြရမှာလဲ …။ အကောင်းဆုံး မဖြစ်ရတော့ရော..ဘာများ စိတ်ပျက်အားငယ်နေစရာရှိမလဲ..
Game Theory အရ ပြောရရင် …တဆင့်ပီးတဆင့် ပိုမိုကြိုးစားရင်း… အရာရာကို ဘာကြောင့်များ
Challenge မလုပ်သွားနိုင်ရမှာလဲ …။ Attitude က အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်….။
something ရှိနေတာ ..nothing ဆိုတဲ့ condition ထက်တော့ သာစမြဲပါ…။
အောက်က သဂျီး ထောက်ပြ ထားတဲ့ ..အကောင်းမြင်သမား နဲ့ အဆိုးမြင်သမား ကိစ္စ
ဆွဲပြောရရင်တော့ … အင်း … ကျုပ်ယုံတာကတော့ Change ပဲ…
Comments By Postစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - padonmar - မောင် ပေဆြာအုပ်ကလိထားတဲ့ HDR - Mလုလင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - padonmar - padonmarပေါင်းစု - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - padonmar - padonmarလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - လင်းဇော် ထက်သစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - uncle gyi - padonmarသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Mလုလင် - အလင်း ဆက်ကိုပေါက်(မန်းလေး)၊ ဆြာအုပ်၊ Mလုလင်3in 1 - (ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲ) - Mလုလင် - padonmarဒေဝေါ ဆိုသည်မှာ - padonmar - KZဖိုင်နယ်မှာ အပိုင်တွယ်မှာက - Myo Thant - သခင် mobileသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - nicolus agral - uncle gyiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - Foreign Resident - ကြက်အူလှည့်အိုဘယ့် ...ခရီးသည် - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - Mr. MarGa - ko pauk mandalayခရီးသည်လေးသို့ - အလင်း ဆက် - လင်းဇော် ထက်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - မဟာရာဇာ အံစာတုံးFloral Gift - Macro Series - ကိုရင်စည်သူ - Mr. MarGaWhat are some of the unique features of e-commerce technology? - ကိုရင်စည်သူလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - နွေဦးကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - Mr. MarGa - padonmarနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - မောင် ပေ - Mr. MarGaမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Mr. MarGa - may julyEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities